२२ वर्ष’का युवकका ३ जना श्रीमती, तीनै जना मिलेर खोज्दै-छन् चौथी सौता !
Homeसमाचार२२ वर्ष’का युवकका ३ जना श्रीमती, तीनै जना मिलेर खोज्दै-छन् चौथी सौता !
December 29, 2020 admin समाचार 8467
सौता भन्ने शब्द महिलाहरु-लाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विवाहपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदा’हरणहरु छन् । महि’लाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर विवा’हित महिला’ले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता ।
उनीहरु अरु धेरै कुरा स’हन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमान:लाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् । तर एक २२ वर्षका युवकका तीन श्रीमतीहरुले भने चौथी सौता’को खोजी गरिरहेका छन् ।
गल्फ टुडेका अनुसार अद’नान नामका यी पाकि:स्तानी युवकले २२ वर्षको उमेरसम्म आइ’पुग्दा तीन बिहे गरिस’केका छन् । र, अब उनका तीन श्रीमतीहरु मिलेर चौथी सौता खोज्दैछन् । उनका तीनैवटी श्रमिती उनीसँगै छन् ।
पाकिस्तानको सियाल-कोटका अदनानको चर्चा अहिले विदेश:सम्म पुगेको छ । मुस्लिम समुदा’यमा १ भन्दा धेरै विवाह गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन तर श्रीमतीले नै आफ्नी सौता खोज्नु भने निश्चय पनि अनौठो कुरा हो ।
अदनानले पहिलो बिहे १६ वर्षको उमेरमा गरेका थिए । दोस्रो श्रीम’तीसँग २० वर्षमा र अर्कीसँग २१ वर्षको उमेरमा बिहे गरे’का हुन् । अदनानकी श्रमिती’हरुको नाम शुंभाल, शुबाना र शाहिदा हो ।
अहिले यी तीनै’जना सौता मिलेर चौथी सौताको खोजी गरिरहेका छन् र उनीहरुलाई चौथी सौता पनि अंग्रेजी’को एस अक्षरबाट नाम आउने नै चाहिएको छ । एस अक्षर’बाट नाम आउने सौता आएमा घरमा खुसी रहिरहने उनीहरु मान्छन् ।
अदनानका २ श्रीम’तीका सन्तान पनि छन् । जेठी श्रीमती शुंभालका ३ र माइली श्रीमती शुबा’नाका दुई सन्तान छन् । शुबाना’को एउटा बच्चालाई कान्छी शाहिदाले आफ्नो माने’की छिन् ।
अदनानका तीन श्रीमती’हरुले उनी’माथि सबै श्रीमतीहरु:लाई पूरा समय दिन नसकेको आरोप भने लगाउँछन् तर ती’नैवटीले अदनान र बच्चाहरुको ख्याल गछृन् । अदनान तीनै-जना श्रीमती:लाई प्रेम गर्छन् । उनको घरको एक महि’नाको खर्च डेढ लाख पाकि’स्तानी रुपैयाँ हुन्छ ।
टिकटकमा भाइ’रल सचिन परियार अन्तत आयुषासँग दोहोरीमा भिडे (भिडियो सहित)
राजेश हमालले जन्मदिनमा मधु सँगै यसरी का`टे केक (भिडियो)
June 10, 2021 admin समाचार 4926
संधैका वर्षहरुमा महा’नायक राजेश हमालले पशुपति क्षेत्रका वृद्धा’श्रममा पुगेर मना’उने गरेका थिए । तर यसपटकको जन्म’दिन अभिनेता राजेश हमालले भिन्न अनु’भव गरे । उनले फरक ठाउँ’मा पुगेर जन्मदिन मनाए । महानायक हमालले बुधबार ५७ औं
चर्चित कलाकारको भन्दा मिठो आवाज भएकी, ११ बर्षिय बहिनीको जादुमयी स्वर(भिडियो सहित)
March 8, 2021 admin समाचार 6076
लोक गि’तमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल उनै बिष्णुलाई आज टक्कर दिन सानो बाल प्रतिभा जन्मि’एको छ जस्को उमेर मात्र ११ बर्ष छ । तर उन’को कला भने सारा चर्चित राष्ट्रिय कलाकारलाई फलप खुवाउने छ
सरकारबाट रा’ष्ट्रघाती काम भयो : पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव (भिडियो)
June 1, 2021 admin समाचार 4659
नेपालका प्रथम रा’ष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुरे संरक्षण अभियानका सर्जक हुन् । उनी राष्ट्रपति भएकै बेला राष्ट्रपति चुरे संर’क्षण अभियान सुरु भएको हो । यो कार्यक्रमलाई सर’कारले पछिसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी